Nagu saabsan - D&L Warshadaha Iyo Ganacsiga (Xuzhou) Co. Ltd.
Hal-ku-dhigga Shirkaddu Halkaan Ayuu Marayaa
Warshadaha D&L Iyo Ganacsiga (Xuzhou) Co. Ltd. waxay ku takhasustay soo saarista iyo soo saarista muraayadaha indhaha, Thereare taxane badan, sida muraayadaha dhiirrigelinta, muraayadaha muraayadaha, muraayadaha isboortiga, muraayadaha xisbiga, muraayadaha indhaha, muraayadaha macbadka bamboo iyo muraayadaha qoryaha bamboo. Waxaan u diyaarsanahay muraayadaha indhaha oo sidoo kale astaan ​​u noqon kara taxane kasta, waxaan bixin karnaa adeegga jees jeeska ah ee doorbidka midabka iyo qaabka astaanta.
Awood Taageerada Alaabada
7 warshadood oo xirfadlayaal ah 500,000 lammaane / warshad kasta / bishiiba 3 ~ 15 maalmood oo ah dhalmada
Qaar badan oo ka mid ah amarradeena caadada ah ayaa la dejiyaa 1 maalmood gudahood oo si joogto ah ayaa naga naga dalbadaa. Dhamaan weydiimahayaga waxaa laguugu jawaabayaa saacadaha 1-4, kan ugu dhaqsaha badan waa 5 daqiiqo gudahood, waqtiga hogaaminta ee amarrada keydinta diyaarka ah ee 1 toddobaad, amarrada astaanta caadada ee 12-15 maalmood. Faa'iidooyinkeenna, waxaan ku bixin karnaa waqti dhalmo oo sax ah, muraayadaha indhaha oo fiican, iyo adeegga iibka ka dib. Waan ku qanacsanahay inaan aragno alaabtayada oo la yaabay oo waxaan ka helnay faallooyin badan oo wanaagsan isticmaaleyaasha. Macaamiil badan ayaa naga dalbaday si isdaba-joog ah bil ka bil, iyo sannadba sanadka ka dambeeya.
Ku soo dhowow inaad nala soo xiriirto wixii su'aalo ah oo ku saabsan muraayadaha indhaha, waxaan isku dayi doonnaa sida ugu fiican inaan kuu soo bandhigno alaabada iyo adeegga ugu sarreeya si loo gaaro guul labada dhinac ah!